HomeArimaha QoyskaU Gaar Dumarka: Sidee Ula Dhaqmi Kartaa Gacaliyahaaga Xanaaqa Badan?
Kalsoonida u dhexaysa labada isqaba waxay aasaas u tahay nolosha guurka iyo xasilloonida, Waxana ay dumarka qaar ka cawdaan xanaaqa Ninkeeda iyo dabeecadiisa xun iyaga oo aan aqoon wax ay u xakamyeen.
Danayn la,aanta ayaa keenaysa in uu Ninku noqdo mid xanaaq badan oo aan waliba is maamuli karin isaga oo aan fahmin waxa uu leeyhay marka uu xanaaqasan yahay.
Xanaaqa ayaa laga yaabaa in ay tahay sabab uu ku soo jeedinayo dareenka xaaskiisa taas oo aan u qaban waxyaabo ay markii hore u qaban jirtay.
Ama waxa laga yaabaa in ay tahay culays Nafsi ah oo uga yimid dhanka dhaqaalaha ma dhibaatooyin kale.
Hadaba waxa aan halkan ku soo bandhigi doonaa sidee ayaa ula dhaqmi kartaa gacaliyahaaga xanaaqa badan inta uu xanaaqasan yahay.
1.Dooro Wakhti Sax ah Oo Aad La Hadasho Gacaliyahaaga:
Waxa jirta wakhtiyada qaar oo uuna dareenka gacaliyahaagu awood u lahayn in uu hadal ka aqbalo qof walba xitaa dadka ugu dhaw iyo xaaskiisa sidaas darteed waa in aad barato dabeecadiisa iyo qaabka uu u fikiro ka hor inta aanad bilaabin in aad la hadasho.
Hadii ay jiraan waxyaabo dhibaya dareenkiisa ama ka xanaajinaya waa in aad ka fogaato in aad la furto mawduuc kasta kaas oo kor u qaadi kara xanaaqiisa.
Xaasku waa in ay wajiga gacaliyeheeda ka ogaato marka uu xanaaqasan yahay iyo marka kale kana fogaato in ay ka sii xanaajiso.
2.Dooro Kalmadaha Saxda ah:
Doorashada kalmado fiican oo sax ah waa halka wado ee aad ku dajin karto xanaaqa gacaliyahaada sabab kasta oo ay tahay.
Waa in aad ka fogaato in aad kalmado xun kula hadasho kuwaas oo ka xanaajinaya laakiin kula hadal kalmado aad ka fikirtay oo fiican kuwaas oo ka saaraya dareenkii xanaaqa ahaa ee uu ku jiray.
3.Ogow Xanaaqa Gacaliyahaaga:
Mararka qaar waxa jirta in uu gacaliyahaadu guriga soo galo isaga oo xanaaqasan isla markiibana bilaabo in uu hadalo kulul kugula hadlo laakiin ha ugu jawaabin hadalo la mid ah laakiin waa in aad ogaato sababta xanaaqiisa adiga oo dagan.
Waxa aad isku daydaa in aad dhagaysato waxa uu leeyahay adiga oo waliba Ixtirmaam u muujinaya adiga oo in aad arintaas kala hadasho dib ugu dhigaya wakhti kale oo uuna xanaaqsanayn.
4.Ka Fogow wax walba oo ka xanaajinaya:
Waa in aad gacaliyahaaga u muujiso jacayl, daryeel iyo Ixtiraam kana fogow ama iska dhaaf waxa uu necebyahay sababtana u nooqn kara in uu xanaaqo taas ayaana keeni karta in uu maamulo xanaaqiisa xitaa hadii uu markii hore sii xanaaqsanaa.
5.Si Qurux badan Ugu Sii Diyaar Garow Imaatinkiisa:
Arintan ayaan kaliya ahayn in aad sii xidhato dhar qurux badan iyo waliba in aad sii qurxiso wajigaaga laakiin waa in aad sidoo kale ula dhaqanto si qurux badan oo uu ku jiro hadalo jilicsan oo jacayl ku dheehan yahay iskuna day in aad u dhoola cadayso marka aad aragto una qabo wax walba soo suurtagal ah oo ka farxinaya.
U Gaar Ah Ragga: Ma Doonaysaa In Gacalisadaadu Waligaa Ku iloobin Waliba Yeelato Indho Aan Adiga Ahayn, Wadadan Raac